မြန်မာပြည်က ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့နွား အတိတ်နိမိတ်များ ကောင်းမှာလား ဆိုးမှာလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » မြန်မာပြည်က ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့နွား အတိတ်နိမိတ်များ ကောင်းမှာလား ဆိုးမှာလား?
မြန်မာပြည်က ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့နွား အတိတ်နိမိတ်များ ကောင်းမှာလား ဆိုးမှာလား?
Posted by winkyawaung on Oct 21, 2010 in News | 25 comments
Myanmar News ဦးခေါင်းနှစ်လုံး နှင့် နွား
အတိတ်နိမိတ်များ ကောင်းမှာလား ဆိုးမှာလား?
မကွေးမြို့နယ် မကွေးမြို့ရဲ့ အရှေ့ဘက်(၃)မိုင်ကွာ ဆားတိုင်ကန်ရွာမှာ (၁၇-၁၀-၂၀၁၀) တနင်္ဂနွေနေ့၊ ည၇နာရီ၁၅ မိနစ်အချိန် (မိထူး)ဆိုသော ဦးခေါင်း နှစ်လုံးပါတဲ့ ဒီနွားမလေးကို မွေးဖွားပါတယ်။ ပိုင်ရှင်အမည်တွေကတော့ ဦးကက်စိန်၊ ဒေါ်အမာတင်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ နွားမကြီးက ဖရီရှန် နို့စားအမျိုးအစား နွာမကြီးပါ။ သူ့ကို မေထွန်း လို့နာမည်ပေးထားပါတယ်။ ယခုနွားကလေးနဲ့ဆိုရင် (၃)သား (၃)ခါ မွေးဖွားပြီးခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
နွားငယ်ကလေး ဦးခေါင်းနှစ်လုံးခွဲထွက်ရာ အလယ်တည့်တည့်မှာ မျက်စေ့တစ်လုံးသာ တွေ့ရပါတယ်။ ဦးခေါင်းနှစ်လုံးရဲ့ ၀ဲ၊ယာဘက်တွေမှာ ကြည်လင်ထောက်ပနေတဲ့ မျက်လုံးနှစ်လုံး၊ ပါးစပ်။နားရွက်၊ နှာခေါင်းတွေ အစုံအလင်ပါ ပါတယ်။ ခလယ်(အတွင်းဘက်)က မျက်လုံးသာ တစ်လုံးထဲပါနေပါတယ်။ ဦးခေါင်းကြီးက နှစ်လုံးဆိုတော့ ခေါင်းကို ကောင်းကောင်းမထူနိုင်ပါဘူး။ နို့စို့တဲ့အခါ တစ်ဘက်ခေါင်းက နို့စို့နေရင် အခြားတစ်ဘက်ခေါင်းကလဲ လုပြီးနို့စို့နေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နွားမကြီးဆီက နို့ကို ညစ်ယူပြီး နို့ဗူးနဲ့ ခေါင်းတစ်ဘက်ဆီကို သူ့သခင်မက လှည့်တိုက်ပေးနေတာကို မြင်တွေ့ခဲ့ပါတယ်။ နွားလေးရဲ့ အမြင့်ဟာ နှစ်ပေခွဲဖြစ်ပြီး အရှည်ကတော့ သုံးပေခွဲကျော်ကျော် ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။ ယနေ့အထိ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ မြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ အထူးအဆန်းဆိုတော့ မိုးထဲ လေထဲမှာကိုး ကားတွေ၊ ဆိုင်ကယ်တွေနဲ့ အနယ်နယ် အရပ်ရပ်က လာရောက်ကြည့်ရှုနေကြပါတယ်။
မြန်မာပြည်က ဘုရားတွေ တစ်ချို့မှာ( မနုသီဟ ဖင်နှစ်ခွ)ရုပ်တွေ၊ ပုံတွေကို မြင်တွေ့ကြရပါတယ်..။ ယခုတော့ (နွားမဥသဖ ဦးခေါင်းနှစ်ခွ) နဲ့ ထူးထူးဆန်းဆန်း မြင်တွေ့နေရပါပြီ..။ လာရောက်ကြည့်သူတွေကတော့ နွားလောကမှာ ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့နွား ဘီးလူးလောကမှာ ဒသဂီရိ( ခေါင်းဆယ်လုံးနဲ့) ပေါ်လာကြတယ်..။ ကျုပ်တို့ လူ့လောကမှာတော့ ခေါင်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ပြောင်းပြောင်းပြီး လာလိုက်ကြတာ မနည်းတော့ပါဘူး..။ သူတို့ကလဲ ဆင်ဖြူခြောက်ကောင်နဲ့ မင်္ဂလာအယူတော်ခံသလို..၊ ကျုပ်တို့ကလည်း ဒီ( နွားမဥသဖ ဦးခေါင်းနှစ်ခွ)လေး ထူးထူးခြားခြား ပေါ်လာတာကို မင်္ဂလာ ယူရမှာဘဲဗျို့။ အင်း ဒါ မြန်မာပြည်အတွက်တော့ အတိတ်နိမိတ်ကောင်းမှာလား?။ ဆိုးမှာလား? ဆိုတာကိုတော့ စောင့်မျှော်လို့သာ ကြည့်ကြပေရဦးမည်ဟု.. တီးတိုး.. တီးတိုး..သဖန်းပိုးထိုးပြီး ပြောဆိုနေကြသော အသံများကို ကြားသိခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျား..။
မှတ်ချက်။ ။ မည်သည့်ဂျာနယ်များမှ ဖော်ပြခြင်းမရှိသေးပါ။ မြန်မာပြည်၏ အတိတ် နိမိတ်များ အား ဤ သတင်းကို အခြေခံ၍ ပညာရှင်များ၊ စာဖတ်သူများ ဝေဖန် ဆွေးနွေး ပေးတော်မူကြစေလိုပါသည်။
အယ်ဒီတာမှတ်ချက်။ ။ ဒီသတင်းကို မန္တလေးဂေဇက်က ၄ဒေါ်လာနဲ့ဝယ်လိုပါသည်။ စာတင်သူမှ သဘောတူပါက editor@myanmargazette.net သို့ အီးမေးလ်ပို့ စေလိုပါသည်။ သတင်းစာတွင်ပုံနှိပ်ဖေါ်ပြမည်ဖြစ်ပါကြောင်း။
ကွန်နရှင် မကောင်းလို့ နံနက်(ရ )နာရီက စတင်တာ နေ့လည်(၁၂း၃၀)နာရီမှ တင်၍ရပါသည်။ ကျော်ခွ၍ တင်မှ ရပါ၏။ အယ်ဒီတာမင်းများ ထိုက်တန်စွာ သုံးပေးစေချင်ပါ၏။ကိုယ်တိုင် သတင်းယူပြီး ကိုယ်တိုင် ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နယူးယောက် ငွေကြေးဈေးကွက်ရဲ့ အိုင်ကွန်းတခုက ခွေ့မဲ့နွားသိုးကြီးပုံပါ။ အဲဒီရုပ်ထုကို ကြေးနဲ့ထုထားပြီး ဝေါစထရိနားမှာထားပါတယ်..။
မြန်မာပြည်က ဒီခေါင်းနှခွနဲ့နွားမလေးကို အမိမြေရဲ့ ငွေကြေးနဲ့ပါတ်သက်တဲ့အပိုင်းမှာ အောင်မြင်ကြီးပွားတော့မဲ့နမိတ်လို့…
Charging Bull, which is sometimes referred to as the Wall Street Bull or the Bowling Green Bull, isa3,200 kilograms (7,100 lb) bronze sculpture by Arturo Di Modica that stands in Bowling Green Park near Wall Street in Manhattan, New York City. Standing 11 feet (3.4 m) tall and measuring 16 feet (4.9 m) long, the oversize sculpture depictsabull, the symbol of aggressive financial optimism and prosperity, leaning back on its haunches and with its head lowered as if ready to charge. The sculpture is bothapopular tourist destination which draws thousands of peopleaday, as well as “one of the most iconic images of New York” anda“Wall Street icon” symbolizing “Wall Street” and the Financial District.
ကျော်ခွပြီး တင်ထားရတာကိုတော့ ချီးကြူးပါတယ်
ဤ သတင်း၏ နောက်ဆက်တွဲ ထူးခြားသတင်း ရှိရင် ဆက်၍ တင်ပေးပါမည်..။ ယခုတော့ ပြည်သူလူထုအတွက် နိမိတ်ကောက်ပေးကြပါခင်ဗျား..။
မြန်မာပြည်က ဦးခေါင်းနှစ်လုံးနဲ့နွား အတိတ်နိမိတ်များ ကောင်းမှာလား ဆိုးမှာလား? ဆိုတာ အတိအကျ မပြောနိုင်ပေမယ့် အတိအကျပြောနိုင်တာတခုကတော့
ကောသလအိပ်မက် ၁၆ ချက်ထဲက တခု ဖြစ်တဲ့ (ခံတွင်း နှစ်ခုရှိသော မြင်းသည် ကျွေးလာသော မုယောစပါး စသည်တို့ကို
ခံတွင်းနှစ်ခုဖြင့်ပင် စားသည်ဟု မြင်မက်သော အိပ်မက်)ကို ဘုရားရှင် ရှင်းပြရာတွင်
(နောင် တရားမစောင့်သော မင်းတို့လက်ထက်၌ တရားမစောင့်သော တရားသူကြီးတို့သည်
နှစ်ဖက်သော အမှုသည်တို့မှ ပေးသော တံစိုးလက်ဆောင်တို့ကို စား၍ အမှုတို့ကို
မမှန်မကန် ဆုံးဖြတ်ကြကုန်လတ္တံ့) ဟူ၍ ဖြစ်လေတော့ လက်ရှိ အာဏာသိမ်း နအဖ တရားသူကြီးတွေရဲ့ လုပ်ရပ်မျိုးထက် ဆိုးမယ့် ရွေးကောက်ခံ နအဖကြံ့ဖွတ် တရားသူကြီးတွေ ပိုဆိုးမှာ သေချာသလောက်ပါပဲ။ လက်တွေ့ စစ်ဖက် ဥပဒေရေးရာအကြီးအကဲလုပ်ခဲ့တဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌရဲ့ လုပ်ရပ်တွေက သက်သေပြနေဆဲပါ။
မြန်မာ နိုင်ငံမှာ နွားဦးနှောက်နဲ့ လူ ၂ယောက်အုပ်ချုပ်မည်…. အဟီး.. ထင်တာစွတ်ပြောတာ…
ဟုတ်တယ်မနက်ကတည်းက ကော်နက်ရှင်မကောင်းတာ ။ အခုလည်း သိပ်အကောင်းကြီးတော့မဟုတ်ဘူး .. ယက်ကန်ယက်ကန်နဲ့ သွားနေရတာပါပဲ ။ နွားလေးခမျာသနားစရာ … ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတောင်အနိုင်နိုင် … ။
ko kai ပြောသလိုပဲကောင်းတဲ့နိမိတ်ဖြစ်ပါစေ
မြန်မာပြည်ကတော့ ကောသလအိမ်မက် (၁၆)ချက် ထက်ကိုး ပိုပြီးမှန်နေပါတယ်.။ ယခုရွေးကောက်ပွဲအတွက် ကောသလမင်းအိမ်မက် (၃၂)ချက် ဖြစ်ကြပါတော့မယ်..။ ထပ်မံ ဝေဖန် အကြံပြုပေးကြပါအုံးနော်…။
နို့ဗူးတိုက်တဲ့ပုံမပေါ်လို့ ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ကျန်ပုံများကိုလည်း ထပ်မံတင်ပေးလိုက်ပါမည်။
တကယ်လို့ ပိုစ်ရေးချင်ရင် Site Adminထဲဝင်ပါ
ရောက်သွားရင်အပေါ်ထောင့်မှာ newpost ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
post tag မှာအညွန်းထည့်။
ရေးချင်တာမပြီးသေးလို့နောက်မှဆက်ရေးမယ်ဆိုရင် save နဲ့သိမ်းထား။
ချာတူးလန်ရေ သေချာလည်းမကြည့်ပဲနဲ့ ဘယ်နှယ့်ကိုပေါက်ကိုသွားပြေတာလဲ။
ကိုပေါက်က ဒီမှာရေးတာကြာလှနေပြီ ။ အခုမေးတာက ဘယ်သူလဲ ။
ချစ်စရာ လွဲလွဲ လေးများ။
သူဂျီး သမီးလို့ မပြောရဘူး။
အားတက်သရော ကူညီ တော့တာဘဲ။
နွားလေး မွေးတဲ့နေကနေ ယနေ့အထိ မိုးကောင်းနေပါတယ်။ မုန်တိုင်းကျမယ်ဆိုလို့ လူတွေ တော်တော်စိုးရိမ်နေရပါတယ်။
နို့တိုက်နေတဲ့ ပုံ ထပ်မံ တင်တယ် ဆိုလို့… အဲဒီပုံလေး မပေါ်သေးပါဘူး ကိုဝင်းကျော်အောင်
ဓာတ်ပုံ(၆)ပုံ တင်ထားပါတယ်။ အောက်ဆုံးက သူ့သခင် ကိုယ်တိုင် နို့တိုက်နေတဲ့ပုံပါ။ စာတမ်း မထိုးလိုက်မိဘူး။ နို့ဗူးက အဖြူရောင်ဖြစ်နေတော့ သေသေချာကြည့်မှ မြင်ရပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဟုတ်ကဲ့ မြင်ပါပြီ.. အခုမှ သတိထားမိတာပါ။
အတိတ်နမိတ် ဆိုပြီး ပြောနေကြတာနဲ့..
နွားကလေးက အမိဝမ်းက အခုမှ ကျွှတ်လို့ နွားကလေး သူခြေပေါ် သူရပ် နေရယုံဘဲ ရှိသေးတယ်.. လူတွေ အတွေး မျိုးစုံ အမြင် မျိုးစုံနဲ့ ပြောနေကြတာ နွားကလေးကတော့ သိရှာမှာ မဟုတ်ပေမဲ့.. မကောင်းဘူး ပြောတဲ့ လူတွေ သိပ်များရင် နွားကလေး သက်တမ်းတောင် စိအောင် နေရမှာ မဟုတ်ဘူး ဟင်းအိုးထဲ ရောက်သွားနိုင်တယ်။ နွားကလေး ဘက်က နေပြောပေးတာကြည့်တာပါ။ သတ္တ၀ါအားလုံးကတော့ မတူညီတဲ့ ကုသိုလ် အကုသိုလ် အကျိုးပေးတွေ ရှိနေကြတာဘဲ။ နွားကလေးကလည်း ကံအကျိုးပေးမကောင်းလို့ ခေါင်းနှစ်လုံးဖြစ်ပြီး ဂွတီးဂွကျဖြစ်နေရတာ..
ဟုတ်ကဲ့ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကိုဝင်းကျော်အောင်
ဒီပို့လေးကို ကျွှန်တော်ရဲ့ တခြားဆိုဒ်မှာ ကူးယူးဖော်ပြခွင့်ပေးပါလို့ တောင်းဆိုပါတယ်နော်
သတင်း ကောင်းတခုအနေနဲ့ စာဖက်သူတွေ သိရှိစေချင်လို့ပါ . . .။
သတင်းဦး သတင်းထူး ဖတ်စေချင်လို့ ကြိုးစားတင်ပေးတဲ့ စာရေးသူရဲ့ စေတနာကို လေးစားပါတယ် ..
သူကြီးရဲ့ သတင်းစာမှာ ဖော်ပြခံရလို့လဲ ချီးကျူးပါတယ်ဗျာ …
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်က သတင်း….
ကောင်းတာယူတော့.. အဲဒီအချိန်ကထက်စာရင်.. ကောင်းတာတွေဖြစ်နေတော့တာပေါ့…
အဲဒီနွားရုပ်… နေပြည်တော်..လမ်းဆုံတခုခုမှာ ထုပေးထားဖို့ကောင်းတယ်..
ဒါဆိုရင်ဘွံတ်အဲလိုအော်ရင် ဘယ်လိုတွက်မလဲမသိဘူးနော် ခေါင်း ၂လုံးကြီးများတောင်လေ
One head or two heads or what the heck. It is an animal. Unnatural born only.
Good luck or bad luck..
I can see you could not post it smoothly..
A cow can not change our country future